Duufaanta Dorian: astaamaha, sababaha iyo cawaaqibta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Duufaannada
Waxaan ognahay in isbeddelka cimilada uu kordhinayo soo noqnoqoshada iyo xoojinta astaamaha saadaasha hawada ee noocyada aan caadiga ahayn ay ka dhacaan. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa Duufaan Dorian. Waxay dhacday bishii Sebtember 2019 waxaana lagu qoray qaybta 5. Heerkan heerkiisu waa midka ugu sarreeya. Waxay sababtay masiibooyin halis ah waxayna na bartay u janjeerida isbeddelka cimilada si loo abuuro noocyo isdaba joog ah noocyada dhacdooyinka cimilada daran.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato duufaanta Dorian, astaamaheeda iyo cawaaqibkeeda.
2 Raad-raacii Duufaantii Dorian
3 Adeegyada ay saameysay Duufaanta Dorian
4 Isbedelka Duufaanta
Qiyaasta Saffir-Simpson waa nidaam cabbira duufaan. Waxaa loo qaybiyaa 5 qaybood, kuwaas oo tixgeliya xawaaraha dabaysha iyo dhaqdhaqaaqa duufaannada dabeylaha kadib, iyo tixgelinta kororka aan caadiga ahayn ee heerka badda dabeylaha. Duufaanta Dorian waxay gaartay qeybta 5, oo ah tan ugu weyn uguna halista badanIn kasta oo ay gaabis noqotay markii ay gaadhay Bahamas, taas oo sababtay dhaawacyo halis ah iyo ugu yaraan shan dhimasho.
Aan aragno xawaaraha dabaysha iyadoo kuxiran qaybta:
Qeybta 1: Dabaylaha u dhexeeya 118 iyo 153 KM / saacad
Qeybta 2: Dabaylaha u dhexeeya 154 iyo 177 KM / saacad
Qeybta 3: Dabaylaha u dhexeeya 178 iyo 209 KM / saacad
Qeybta 4: Dabaylaha u dhexeeya 210 iyo 249 KM / saacad
Qeybta 5: Dabaylaha in ka badan 249 KM / saacaddii
Raad-raacii Duufaantii Dorian
Markii la ogaaday Duufaanta Dorian, Xarunta Duufaanta Qaranka waxay la yaabtay "hubin la'aanta saadaasha waddada" ee duufaanta. Xarunta Duufaanta Qaranka waxay u maleyneysay in sababo badan oo xalal tusaalayaal ah, isku halaynta saadaasha xoogga ay wali hooseyso. Waa in la ogaadaa in duufaannada duufaannada kuleylka ah sida Dorian ay inta badan adag tahay in la saadaaliyo
Dorian waxay haysatay mudo awood hubaysan iyo bamgareyn, badanaa sababta oo ah boodhka ka imanaya Saxaraha ayaa gaadhay badda Kariibiyaanka wuxuuna hoos u dhigay horumarkiisa. Xitaa dhacdadani waxay keenaysaa dhexroorka duufaanka inuu wareego inta udhaxeysa 35 km ilaa 75 km. Laga soo bilaabo qaybtii hore, dhabbihiisu waxay tilmaameen inuu soo maray Puerto Rico iyo waqooyi-bari ee Jamhuuriyadda Dominican. Qaarkood xitaa waxay saadaaliyeen inay gaari karto woqooyiga Cuba. Laakiin mar kale ayuu la yaabay, oo wuxuu u daayay kaliya roobab yar Puerto Rico. Dhamaadka, waxay u jihaysatay waqooyi-galbeed waxayna gaadhay Bahamas iyo Florida ee Maraykanka.
Panorama-kii uu Dorian kaga tagay jasiiradaha Bahamas wuu xumaa. Ugu yaraan 5 ayaa dhimatay in ka badan 20na waa dhaawac. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Hay'adda Laanqayrta Cas ee Caalamiga ah, oo la soo saaray Isniintii, Sebtember 2, 2019, in ka badan 13 oo guri ayaa la arkay in ay aad u burbureen dhowrna si toos ah ayaa loo burburiyey. Intaa waxaa dheer, daadadku waxay sababeen Jasiiradaha Abaco, oo ah koox godad ah waqooyiga-galbeed ee Bahamas. Ceelasha biyaha laga cabo waxaa ku sumoobeen biyo cusbo leh.
Adeegyada ay saameysay Duufaanta Dorian
Gudaha Mareykanka, marinka duufaanta ayaa saameysay in ka badan 600 duulimaad. Imaatinka duufaanta awgeed, garoomada diyaaradaha ee Orlando, Daytona Beach, Fernandina Beach, Jacksonville iyo Pompano Beach way xirnaan doonaan ilaa Arbacada. Intaa waxaa dheer, dekedaha Florida ayaa sidoo kale joojiyay bixinta adeegyada tareennada sidoo kale waa la joojiyay. Gobollada Georgia, South Carolina, iyo North Carolina, dhammaan deggeneyaasha ku noolaa bariga I-95 waxaa laga daad gureeyey suurtagalnimada daadad.
Duufaanta waxay ku jirtay Bahamas muddo 18 saacadood ah. Waxay ahayd riyo dhab ah. In kasta oo la filayay inay gaabiso oo xitaa joogsato, in yar baa filaysay joogsigeeda Bahamas inuu sii dheeraado intaas.
Laga soo bilaabo galabnimadii Isniinta, Dorian wuxuu joogay ku dhowaad isla goobta ilaa waaberigii Talaadada, markii uu bilaabay inuu u dhaqaaqo woqooyi-galbeed xawaare ka yicib ah: 2 km / h oo markii dambe u kacday 7 km / h.
Sida laga soo xigtay saynisyahannada waxaa jira isbeddel dhib leh oo ka imanaya isbeddelka cimilada. Duufaannada kuleylaha waxay u badan tahay inay istaagaan meel u dhow xeebta oo ay dhowr saacadood ku qaataan gobolladaas. Sida iska cad tani waa wax aad u naxdin leh, maaddaama saameynta xun ee magaalooyinka lagu arki doono waqti dheer. Sida laga soo xigtay daraasadaha, celceliska xawaaraha duufaannada ayaa hoos u dhacay 17%, inta u dhexeysa 15,4 km / h iyo 18,5 km / saacaddii.
Xaqiiqda ah inay duufaantu ku joogsatay meel cayiman waxay ka dhigan tahay in waxyeellada aaggaas ay aad u kordhayso. Tani waa sababta oo ah dabaysha iyo roobku waxay saameeyaan gobollada muddo dheer. Tusaale ahaan, Harvey wuxuu in ka badan 1.500 milimitir oo roob ah ku shubay Houston ka dib markii uu halkaas joogay dhowr maalmood. Duufaanta Dorian ayaa Bahamas ku dhufatay mowjado sare oo labaatan dhudhun ah iyo roob da’aya in ka badan 48 saacadood.
Sida lagu xusay daraasadaha, nus qarnigii ugu dambeeyay, duufaan kasta oo istaagtay ama gaabisay waxay leedahay sabab gaar ah. Sababta ayaa la xiriirta daciifinta ama burburka qaababka dabaysha baaxadda weyn leh. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan ayaa la rumaysan yahay inay ugu wacan tahay hoos u dhaca guud ee wareegga Hawada (dabaysha caalamiga ah), oo ka samaysata duufaanno kulaylaha una wareegaya ulaha u dhexeeya latitude.
Duufaannada iskood uma dhaqaaqaan: waxaa dhaqaajiya mowjadaha dabaysha ee caalamiga ah, oo ay saameyn ku yeeshaan culeyska culeyska ee jawiga.
Khubaro tiro yar ayaa ka shakisan saameynta kuleylka adduunka ee duufaanada kuleylaha. Philip Klotzbach, oo ah khabiir ku takhasusay saadaasha hawada oo ka tirsan Jaamacadda Colorado State University ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in aysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in isbeddelka cimilada ay soo saareyso duufaanno badan, laakiin ay jiraan caddeyn muujineysa in isbeddelka cimilada uu abuurayo xaalado ay ku sii burburaan. Tusaale ahaan, Dorian waa duufaantii shanaad ee Nooca 5-aad ee ka sameysata badweynta Atlantik afar sano gudahood, rikoor aan horay loo arag. Jawi diiran ayaa ceshan kara qoyaan badan sidaa darteedna roob badan keena. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo ay kordhayaan heerarka badda, duufaanka duufaanku wuxuu sii galayaa gudaha gudaha, maadaama heerka badda uu ka sareeyo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Duufaanta Dorian iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaan Dorian
Kala soocida cimilada ee Köppen